Dowladda Soomaaliya: Ma jirto shirkad shidaal oo heshiis la geli karta Maamul Goboleed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa uga digtay shirkadaha ajnabiga ah ee shidaalka ka baaro meelo ka mid ah dalka ineysan heshiis la geli Karin maamul goboleedyada.
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka digtay shirkadaha shidaalka ee sida sharci darrada ah u sahminaya batroolka dalka, waxaana wasaaraddu sheegtay in tilaabo sharci ah laga qaadi doono cidii lagu arko arrinta nuucaas ah.
Agaasimaha Qorsheynta iyo horumarinta Wasaaradda macdanta iyo Batroolka, Maxamed Cali Nuur Xaaji oo la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay inay u digayaan shirkadaha sheeganaya lahaanshiyaha baro shidaal oo ku yaalla dalka, isagoo xusay in maamul goboleedyada dalka ka jira aysan geli karin heshiisyo ku saabsan dhanka wax soo saarka shidaalka.
Waxaa uu ugu baaqay sarkaalkan shirkadihii hore heshiisyada la galay dowladdii dhexe inay dalka ku soo laabtaan oo hawshooda dardar galiyaan si ummada Soomaaliyeed uga faa’iideystaan khayraadkeeda, halka shirkadana cusubna oo kula taliyey in lasoo xiriiraan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
“Waxaan ugu baaqaynaa in shirkadihii hore ee wixii ka horeeyay 1991-kii ee heshiiska la galay dowladii dhexe inay dalka ku soo laabtaan, kuwaasi oo aan qaarkood la kulanay mas’uuliyiin ka tirsan, laakiin shirkadaha cusub waxaa la farayaa in ay la soo xiriiraan Madaxda Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee Xukuumadda”. ayuu yiri Maxamed Cali Nuur
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa wadda qorshe ah in shirkadaha ajnabiga ah ee danaynaya in ay Soomaaliya ka sameeyaan baaritaano la xiriirka sahminta Macdanta iyo Batroolka dalka aysan arrimahaasi kala hadli Karin Maamul Goboleedyada dalka ka jira, ayna si toos ah u soo maraan waddooyinka sharciga ah.
Arrintaan ayaa culeys xoog leh saari doonta labada maamul ee Somaliland iyo Puntland, kuwaasoo horay heshiisyo ula galay shirkado sahmiya shidaalka iyo gaaska oo ajnabi ah.